साता दिनभित्रमा एक हजार पीपीई बनाउँछाैं | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more साता दिनभित्रमा एक हजार पीपीई बनाउँछाैं
हामीलाई केहि चिकित्सकहरुले अहिलेको समस्यालाई देखाउँदै सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले केहि पहल लिनुपर्छ भनेर अघि सरेका हौं ।
काठमाडौं । काठमाडौंका अस्पतालहरुमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले कोरोनाका बिरामीलाई जाँच गर्ने सामान्य ड्रेस पनि लगाउन पाएका छैनन् । उनिहरु अत्यन्तै जोखिमपूर्णं रुपमा बिरामीहरुको जाँच गरिरहेका छन् ।
चिकित्सकको नै स्वास्थ्यमाथि चुनौति देखिएको यस परिस्थितिमा महाबिर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चिकित्सकले कोरोनाका बिरामी जाँच गर्दा लगाउने (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट– पीपीई) बनाउने काम सुरु गरेको छ । आविश्कार केन्द्रले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डअनुसार नै पीपीईको निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौंका वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमै अभाव देखिएको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आविश्वकार केन्द्रले पीपीई बनाउने पहल लिएको हो ।
आज हामीले कोरोना महामारीको बेला पीपीई बनाउने जिम्मा लिएको राष्ट्रिय आकिष्कार केन्द्रसँग पीपीई निर्माणको काम कहाँ पुग्यो भनेर छोटो कुराकानी गरेका छौं । राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रका महाबिर पुनसँग पीपीईको निर्माणको कामबारे गरिएको छोटो कुराकानी जस्ताको तस्तै ।
चिकित्सकसँग कोरोनाका बिरामी जाँच गर्दा लगाउने पिपिई (पसर्नल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट) नभएको चर्चा चलेसँगै तपाईंहरुले हामीले बनाउँछौं भनेर कुराकानी गर्नुभएको थियो । कहाँ पुग्दै छ पिपिई बनाउने कुरा ? कति बनाउनु भयो ?
चिकित्सकसँग कोरोनाका बिरामी जाँच गर्दा लगाउने (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट– पीपीई०को नेपालमा निकै अभाव छ । त्यहि अवस्थामा हेरेर हामीले जति सक्छौं त्यति बनाऔं भनेर काम सुरु गर्दैछौं । बल्ल केहि सामाग्री भेटाएका छौं । हिजोबाट केहि ग्रामेन्टलाई जिम्मा दिएका छौं ।
कोरोनाको त्रासको कारण अहिले काम गर्ने मान्छेहरुको निकै अभाव छ । एउटा चप्पल कारखाना र पेप्सीकोलाको एउटा उद्योगलाई केहि कामको जिम्मा दिएका छौं । त्यहाँ पनि काम गर्ने कालिगढको निकै अभाव रहेछ ।
आज अर्को पनि ग्रामेन्ट फेला पारेका छौं । त्यहाँ केहि संख्यामा काम गर्ने कालिगढ रहेछन् । हामीसँग पीपीई बनाउने कच्चा सामाग्रीको पनि निकै अभाव छ । खोज्दै छौं भेट्यौं भने त्यहाँ पनि काम सुरु हुन्छ ।
पिपिईको माग निकै छ । कति दिनमा कति थान तयार गर्न सक्नुहुन्छ ?
भर्खरै बनाउन सुरु गरेका छौं । बनाउँदै जाने हो । मेटेरियल कति पाइन्छ ठेगान छैन । अवस्था अति प्रतिकुल छ । मेटेरियल भेट्यौं भने दिनमा २० जनाले काम गर्दा २ सय जति बनाउन सकिन्छ भन्ने आकंलन गरेका छों ।
कहिलेसम्म कति तयारी पिपिई तपाईंहरुले उपलब्ध गराउने अवस्था रहन्छ ?
हामी सातादिन भित्रमा बढिमा हजारसम्म बनाउन सक्छौं कि भन्ने सोंचेका छौं । त्यति बनाउन सकेनौं भनेपनि ७/८ सय त अनिवार्य तयार गर्न सक्छौं ।
माग जताततैबाट छ ? कहाँ बढि प्राथमिकता दिएर उपलब्ध गराउनहुन्छ ?
हामी काठमाडौं वा यहिँ दिने भन्ने केहि योजनामा छैनौं । सुरुमा जो आउँछ उसैलाई नै दिन्छौं । बन्दै गर्छ हामी दिँदै गर्छौं । अहिले हामीलाई काठमाडौंका केहि ठुला हस्पिटलसहित ४०/४५ वटा जिल्लाबाट बनाईदिनको लागि अनुरोध आएको छ । अलि बढि काठमाडौंमा समस्या छ । यहाँ संक्रमितकै उपचार पनि भईरहेको छ ।
अनि यो निशुल्क उपलब्ध गराउनुहुन्छ ? पैसा पनि तोक्नुभएको छ ?
त्यो पनि सोंचिएको छैन् । अहिलेलाई राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रबाटै खर्च गर्छौं । कसैले पैसा दिए दिन्छन् नदिए राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रको खर्चबाटै उपलब्ध गराउँछौं । हामीले अहिलेसम्म निःशुल्क नै उपलब्ध गराउने सोंच गराएका छौं ।
कति परिमाणमा बनाउने सोंच्दै हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो योजना बनाएर अहिले काम गर्न सकिने स्थिति छैन् । अहिले पिपिई बनाउने सामाग्रीको निकै अभाव छ । हामीले सामाग्री पाएसम्म बनाउन सक्छौं ।
अन्त्यमा, खास कहाँबाट कसरी पिपिई बनाउने कार्यक्रम बन्यो ?
हामीलाई केहि चिकित्सकहरुले अहिलेको समस्यालाई देखाउँदै सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले केहि पहल लिनुपर्छ भनेर अघि सरेका हौं । यहाँ सरकारको वा अन्य निकायको सहयोग पनि छैन् । दिए स्वीकार गर्छौं तर आउला भन्ने विश्वासबाट काम गरेका छैनौं । यो परिस्थितिमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट जे सकिन्छ त्यहि गरौं भन्ने हिसाबले काम गरेका छौं ।
चैत १४ गते, २०७६ - १७:०३ मा प्रकाशित